समाचार Archives - Page 149 of 149
विराटनगरमा विस्फोट हुँदा एक बालकको मृत्यु, एक घाइते ! विस्फोट हुने वस्तु के थियो ?
काठमाडौँ- विराटनगरमा अज्ञात वस्तु विस्फोट हुँदा एक बालकको मृत्यु भएको छ । विराटनगर महानगरपालिका १५ रामजानकी टोलमा भएको विस्फोटमा परी सुवास मण्डलको छोरा अमित मण्डलको मृत्यु भएको हो । प्राप्त …
पृथ्वीनारायण,पृथ्वी विचार र राष्ट्रिय एकता
`मेरा साना दुखले आर्ज्याको मुलुक होइन,नेपाल ४ जात ३६ बर्णको साझा फूलबारी हो!चेतना भया।´भन्ने उद्गारले राष्ट्र निर्माण गर्दा आइपर्ने दुख,पिडा चानचुने काम नभएकाले पनि कुनै पनि राष्ट्र निर्माणको काम सानो …
पुष २७, २०७५ रासस
बाँके, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्रकै सिङ्गो मनिकापुरगाउँ लालपुर्जाविहीन छ । अस्थायी लालपुर्जा र एउटा कागजको भरमा मनिकापुरमा ठूलो लगानीमा ठूलाठूला भवन निर्माण भइरहेका छन् । यसमा न घरधनी सुरक्षित छन् न …
रक्सीले मातेर कार्यकक्ष मै सरकारी कर्मचारीको यस्तो चर्तिकला, प्रहरी दिक्क!
पुष २७, २०७५ बिगुल न्यूज- SG
काठमाडौँ, पुष २७ । पछिल्लो समय नेपालका सरकारी कर्मचारीहरुको चर्तिकला एक पछि अर्को गर्दै बाहिरिरहेका छन् । घुस लिने देखि मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यलयमै चर्तिकला देखाउनेहरुको कमि छैन । त्यस्तै प्रदेश …
तिन दिनदेखि अन्शनरत डा.केसीको स्वास्थ्यमा समस्या ,चिकित्सकलाई जाँच गर्न दिएनन् !
पुष २७, २०७५ PS
काठमाडौँ : गत तिन दिनदेखि अन्शनरत नागरिक अभियन्ता प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ। आफ्ना माग पुरा गर्न तिनदिन अगाडी ईलामको फूलगाछीबाट १६औँ पटकको सत्याग्रह सुरु गरेका डा.केसीको …
शहर कामपा : सडक छेउमा अव्यवस्थित रूपमा छरिएका तार व्यवस्थापन गर्दै कामपा !
काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका सडक छेउमा अव्यवस्थित रूपमा छरिएर रहेका तार व्यवस्थापन गर्दै शहर सुन्दर बनाउने कार्यमा लागेको छ । कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलका अनुसार अघिल्लो मङ्सिरबाटै उक्त कार्य शुरु गरेको …
काठमाडौँको बौद्धबाट नेकपाका वडाअध्यक्ष बुद्धको मूर्ति चोरेको आरोपमा पक्राउ !
काठमाडौँ : प्रहरीले बुद्धको मूर्ति चोरेको आरोपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी एक वडाअध्यक्षलाई पक्राउ गरेको छ। डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष कार्मा गुरुङलाई बुद्धको मूर्ति चोरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको …